Inta lagu jiro fasaxa Christmas, waa in aad qaadatay badan oo sawiro daqiiqad kasta macaan qoyska iyo saaxiibada oo muujinaya. Sannadkan, halkii si toos ah iyaga uploading shabakad bulshada sida Facebook ama Flicker, isku day habab kale si ay u wadaagaan agagaarka. Halkan ku taxan yihiin saddex fikradood oo la wadaago sawir Christmas in aad isku daydo. Dhammaan waa qaali ahayn oo u fudud in ay gaaraan.
Flash sawir gallery
Abuuritaanka gallery flash sawir xaqiiqdii waa fikrad fiican inaad la wadaagto aad sawiro Christmas. Waxa aad u baahan tahay oo kaliya waa matoor gallery flash sawir sida Wondershare Flash Gallery Factory oo caawiye si deg deg ah loo abuuro gallery sawir cajiib ah ama soo bandhigga online-qabadka ugu fiican ee aad fikrado. Just dari aad sawiro, muusig iyo effects- dhaceen ka dibna hal abuur leh flash sawir gallery waxaa loo sameeyaa. Markaasay isla kuu soo diri karaa gallery sawir u qoyska iyo saaxiibada via email ah. Haddii aad qabto blogs shakhsiga ah iyo website-yada, kuwaasoo ah idinka ee wadaagi karaan gallery la soo booqda oo dhan. Hoos waxaa ku gallery ah Christmas flash sawir la dhigtay Wondershare Flash Gallery Factory,
Haddii aad qaadatay taxane ah oo photos Christmas, samaynta collage sawir noqon kartaa doorasho wanaagsan, si ay u wadaagaan. Isu sawiro waxa qoyskaaga sameeyey intii lagu jiray fasaxa Christmas (sida dhismaha snowman, Christmas geed qurxinta, casho qoyska Christmas iyo ka badan). Markaas ayaa midkood daabac aad stock card gaar ah ama dalban daabacayaa xirfadeed. Qor wax ay sharaxaan waxa ay ka dhigan tahay hoos sawirka iyo daro qurxinta shakhsi sida aad jeceshahay. Tani hal abuur Christmas qaybsiga sawir fikrad kuu ogolaanayaa inaad si ay u wadaagaan iyo muujiyaan xusuus qaali ah oo aad u saamaxaaya in ay abuuraan tahay qoyska ka-aragnimada nolosha dhabta ah.
Si kale oo weyn si aad ula wadaagto photos Christmas waa in la abuuro filim shakhsi guriga la isticmaalayo sawiro aad qaaday. Waxaa si gaar ah ugu fiican ee kuwa ku nool fog qoyska iyo hadda waxa la joogaa wakhtigii si aad u dareento diiran ee qoyska! Ha u malaynina samaynta wanaagsan-raadinta movie guriga caadadii waa mid aad u adag. Haddaba Wondershare DVD Muqaal dhise , oo dhan waa sida ugu fudud ee pie ah. In la abuuro movie guri, kaliya aad u baahan tahay inaad doorato qaab filim iyo sawirka ku dar, qoraalka iyo sidoo kale Christmas songs- software kaa caawin doona inaad ku dhameysan inteeda kale dhowr daqiiqo. Marka movie guriga lagu sameeyo, in aad sidoo kale waxa ay wadaagaan kartaa xisaabtaada YouTube ama gubi in DVD. Daawo filimka guriga Christmas abuuray by Wondershare DVD Muqaal dhise:
Sida loo dar Picture in Music (MP3)
> Resource > Video > Saddex Siyaabaha la wadaagi kartaa sawiraddaada Christmas qoyska iyo saaxiibada